धपेडी र एसइई परीक्षाको तनावले सांसद चौधरी अस्वस्थ - जागरण अनलाइन
‘एसइई नजिकिँदै गर्दा मलाई बढी तनाव भएको छ’ – शान्ता चौधरी
संघीय सांसद शान्ता चौधरीले एसइई परीक्षा नजिकिँदै गर्दा आफूलाई तनाव बढेको बताएकी छिन्।
यही वर्ष आगामी चैत १० गतेदेखि हुने एसइई परीक्षामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संसदीय दलकी सचेतकसमेत रहेकी चौधरी पनि एक जना परिक्षार्थी हुन्। झन्डै १८ वर्ष कम्लहरी जीवन व्यथित गरेकी शान्ताले २ वर्ष अगाडि मात्रै गाउँकै मावि गोग्लीमा कक्षा ८ मा भर्ना भएकी थिइन्।
दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ लक्ष्मीपुर निवासी ३७ वर्षीया सांसद चौधरीले सानोमा अरूको घरमा कम्लहरी बस्दा पढ्न नपाएको हुँदा त्यो इच्छा पुरा गर्न भन्दै गाउँकै विद्यालयमा नाम लेखाएर अध्ययन थालेकी थिइन्।
तर, उनले संसदमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र पार्टीको कामले नियमित विद्यालय जान पाइनन्। अर्कौतर्फ पढ्ने हुटहुटी पनि छँदै थियो। त्यसैले उनले दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ स्थित महेन्द्र माध्यामिक विद्यालयमा यसपटक खुल्लातर्फबाट एसइई परीक्षा दिने तयारीमा छिन्।
त्यही भएर उनलाई नजिक आउँदै गरेको परीक्षा तनावको विषय बन्ने गरेको बताइन्। ‘जति परीक्षाको मिति नजिक आउँदै छ मलाई उत्तिनै धेरै तनाव बढ्दै गएको छ,’ सांसद चौधरीले भनिन्, ‘आज मैले पढ्न थालेर गल्ती त गरिनँ भन्ने लागेको छ।’
मंगलबार बिहान तुलसीपुरमा सरकारी वकिलको कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेको केही बेरमै बेहोस भएपछि अस्पताल भर्ना भएकी चौधरीले परीक्षामा सफल नहुँदा सबैले सांसद पनि फेल भइ भनेर खिल्ली गर्छन् कि भन्ने चिन्ता जाहेर गरिन्। ‘व्यस्तताले गर्दा मैले राम्रोसँग परीक्षाको तयारी गर्न पनि पाएकी छैन,’ अस्पातलको बेडबाटै चौधरीले भनिन्, ‘एकातर्फ परीक्षा नजिक आइसक्यो अर्कौ तर्फ पार्टीको कामको पनि चापापाच उत्तिकै छ।’
चौधरी आफू लगातार दुई दिन राम्रोसँग सुत्न नपाएको बताइन्। ‘प्रचण्ड कमरेडसँग पोखरा जाँदा राति १ बजेतिर पुगियो र त्यहाँबाट फेरि दाङ आउँदा त्यस्तै एक डेढ बजे तिर घर आइपुगेकी थिएँ,’ चौधरीले भनिन्।
सोमबार राति अबेर मात्रै घर आइपुगेकी चौधरीले एकाबिहानै परीक्षाको तयारीको लागि उठेर पढेको जानकारी दिइन्। त्यसको केही बेरमै उनी घोराहीबाट तुलसीपुरको कार्यक्रममा सहभागी भएकी थिइन्।
चौधरीका स्वकीय सचिव सन्तोष दहितले पनि सांसद चौधरीले फुर्सदको समयमा रातको साढे १२ बजेसम्म र बिहान फेरि ४ बजे नै उठेर परीक्षाको तयारी गर्ने गरेको जानकारी दिए।
सांसद चौधरीको उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकले व्लड प्रेसर १ सय ५० को हाराहारीमा पुगेकाले त्यसमा धपेडी प्रमुख कारक मान्न सकिने जानकारी दिए।
परीक्षा विद्यार्थी जीवनमा सामान्य कुरा हो। तर, सांसद चौधरीको लागि भने यो ठूलो प्रतिष्ठाको विषय बन्न पुगेको हुँदा उनलाई बढी तनाव भएको जानकारहरु बताउँछन्।
‘ढल्किएको उमेरमा एसइई परीक्षा दिन आँटेकी सांसदलाई कतै फेल भइन्छ कि, भन्ने चिन्ता हुनु अन्यथा मान्ने कुरा होइन,’ अस्पतालमै एक जना उनका शुभचिन्तकले भने।
विरामी भएपछि अस्पताल भर्ना भएकी सांसद चौधरीले पनि त्यस्तै विचार व्यक्त गरेपछि उपस्थित सबैले परीक्षाकै कारण धेरै तनाव नलिन सुझाएका थिए।
‘हामी तपाईँलाई चिट चोराउन आउँला माननीयज्यू तपाईं परीक्षाको बारेमा यति धेरै चिन्ता नलिनुहोला,’ अस्पताल बेडमा उनलाई सम्झाउँदै एकजनाले भनेका थिए। चैत १० गतेदेखि शुरू हुन लागेको एसइई परीक्षामा उनको परीक्षाकेन्द्र तुलसीपुरस्थित सेन्टर माविमा परेको छ।
संघीय सांसद तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरी साढे ५ घन्टाको उपचार पछि डिस्चार्ज भएकी छन् ।
मंगलबार बिहान तुलसीपुरमा सरकारी वकीलको कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्वोधन गरेको केही समय पछि उनी बेहोस भएपछि अस्पताल लगिएको थियो।
बिहान साढे ९ बजे अस्पताल लगिएकोमा उनलाई साढे २ बजे डिस्चार्ज गरिएको हो। चौधरीको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भएको थियो। धपेडी र उच्च रक्तचापका कारण उनी बेहोस भएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ।
यसअघि पनि चौधरी पटक/पटक यसैगरी विरामी हुने गरेकी छिन्। ‘म कहिले व्लड प्रेसर लो भएर र कहिले हाई भएर समस्यामा पर्दै आएकी छु,’ चौधरीले भनिन्, ‘काठमान्डौंको खुल्ला मञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा पनि म बेहोस भएर अस्पताल लगिएकी थिएँ।’
उनले आफू अहिले समेत गरेर ४/५ पटक बेहोस भइसकेको जानकारी दिइन्।